Te Hiditra Mora Foana Amin’ny Tahirin’ny Fihaonan’Olon-droa Antserasera Ny Manampahefana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2017 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Português, English
Sary: Pixabay, namboarin'i Kevin Rothrock
Manantena hahita fitiavana ao Rosia ve ianao? Raha eny, ary mikasa hampiasa aterineto mba hihaonana amin'ny olona ianao, tsy dia an-takonana araka ny antenainao angamba ny tohiny.
Ho ampidirina ao anatin'ny lisitra federalin'i Rosia “mpanaparitaka vaovao” ny tambajotra fihaonan'olon-droa Badoo atsy ho atsy, araka ny filazan'ny tranonkala Roskomsvoboda, izay manaramaso ny fahalalahan'ny aterineto ao Rosia. Midika izany fa hotakiana amin'ny tranonkala fihaonana ny fananana lohamilina ao Rosia, izay hitehirizana ny tahirin'ny mpiserasera Rosiana, amin'izay ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana Federaly sy ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana afaka miditra mora kokoa ao amin'ny tahirin'ny mpiserasera sy ny tahirim-pifandraisana.
Raha tsy mety manaraka izany ny orinasa, dia mety ho ampidirina ao anatin'ny lisitra maintin'ny aterineto ao Rosia sy voaràra manerana ny firenena.
Mety ho fanamby ho an'ny Badoo izany. Na dia naorin'ilay mpandraharaha Rosiana Andrey Andreev 11 taona lasa aza izay ny orinasa, voasoratra anarana ao Kiprosy ny orinasa ary manana ny foibeny ao Londra.
Tsy irery ny Badoo. Ahitana ny tolotra mailaka Mail.ru sy Yandex ary ny tambanjotra sosialy Moi Mir sy ny Vkontakte ireo tranonkala hafa ao anatin'ny lisitra, izay miisa 73.
Tsy ny Badoo no tambajotra fihaonana voalohany tafiditra ao anatin'ny lisitr'i Rosia “mpanaparitaka vaovao”. Tamin'ny volana Septambra 2014, nampiditra ny “Mamba”, tranonkala “fahitan-javatra ara-tsosialy” ny Roskomnadzor, ny Mamba dia tranonkala hihaonan'ireo mpiserasera aterineto ivelan'ny Firaisana Sovietika teo aloha amim-pahadisoana, rehefa mitady torohay momba ny siligaoma manana hanitra voankazo amin'io anarana mitovy io, namboarin'ny orinasa Storck.
Afaka miitatra any amin'ireo tranonkala, fampiharana, fandefasan-kafatra eo noho eo, sy izay rehetra virtoaly manangona ny “tahirin'ny mpiserasera” ny fitsipika Rosiana miompana amin'ireo “mpanaparitaka vaovao”, izay tantanina sy ampiharin'ny mpanao fanampenam-bava an'ny fanjakana ao Rosia”.
Ny Zello fandefasan-kafatra ao Etazonia no tranonkala loharanom-baovao voalohany tsy nety nanaiky ny fitakiana ho “mpanaparitaka vaovao” ao Rosia, izay nahatonga ny fampiharana finday tsindrio raha hiresaka (push-to-talk) nampidirina tao anatin'ny lisitra maintin'ny aterineto ao Rosia.
Tamin'ny lahatsoratra bilaogy tao amin'ny tranonkalan'ny Zello tamin'ny 8 Aprily, nilaza ilay mpanorina, Alexey Gavrilov fa tsy vitany hoe “tsy misy antony ara-teknika ihany ny fitakiana ara-pitsarana ataon'i Rosia fa mifanohitra amin'ny fitsipiky ny Zello, izay mahatonga anay tsy hanatanteraka azy ireo”.
Andro vitsy taty aoriana, noraràn'ny Roskomnadzor ny adiresin'ireo tranonkala enina isan-karazany mifandray amin'ny tranonkala Zello. Tsy fantatra ankehitriny ny isan'ireo Rosiana tsy afaka miditra ao amin'ny Zello. Nanoro-hevitra ho an'ireo mpiserasera ny orinasa mba hitahiry ny endrika faran'ny fampiharana ao amin'ny findain'izy ireo, hitahiry ny fifandraisan'izy ireo ivelan'ny aterineto, handika ny fisoratana anaran'izy ireo amin'ny fantsona Zello any amin'ny fampiharana hafa, sy hianatra ny fomba fampiasana ny fampiharana Opera Free VPN.